Family Waiting List (4 and 5-bedroom) – Somali – Minneapolis Public Housing Authority
HomeAboutAgency OverviewMPHA HistoryContact, Map, and HoursLeadershipBoard of CommissionersBoard Schedule, Agendas, and ReportsExecutive Director/CEOMPHA CalendarPolicies & PublicationsNewsPublic HousingProgramsHigh-Rise BuildingsSenior Housing and Assisted Living ServicesLease-to-Own ProgramHow to ApplyEligibilityImmigration StatusResidentsProperty Contact InfoResident Councils and OrganizationsSecurity Command CenterSecurity Tips for Highrise ResidentsResourcesCurrent Public Housing PoliciesFrequently Asked QuestionsResource LinksSection 8Contact Section 8ApplicantsAbout our programHow to ApplyUpdate ApplicationParticipantsSection 8 HCV ProgramPayment StandardsVASH, FUP, PBVPayment StandardsMobility Voucher ProgramProperty OwnersContract Rent IncreasesPassing the HQS InspectionProgram IntegrityDirect Deposit EnrollmentResourcesFormsFrequently Asked QuestionsMcCorvey CenterCora McCorvey Health and Wellness CenterPartnersNewsCalendarGalleryContact UsGlendaleGlendale TownhomesDocuments and CorrespondenceContact UsVendorsContracting OpportunitiesBid TabulationsSupplier DiversityDirect Deposit Enrollment for VendorsContact UsContact, Map, and HoursData Practices Act Requests
Family Waiting List (4 and 5-bedroom) – Somali
Family Waiting List (4 and 5-bedroom) – Somali	mary	2017-05-23T22:14:05+00:00	HAY’ADDA GURYAHA EE DAWLADDU WAXAY FURAYSAA ARAAJIDA SUGITAANKA (WAITING-LIST) EE QOYSASKA EE 3, 4, IYO 5 QOLHay’adda Guryaha ee Minneapolis Public Housing Authority (MPHA) waxay aqbalayaan foomka qoysaska oo Saddaxda qol, Afarta qol, iyo Shanta qol. Waxaana la furi doonaa Arbacada saddexaad ee bil kasto. Waqtigana uu yahay 7:00 a.m. subaaxdi ilaa 10:00 p.m. habeenki. Ogaysiis dambe ayaa labexeen doonaa, hadey waax isbadalaan.
https://MPHA.apply4housing.com/Haddii aad rabto in aad Afsoomaali ku aragto tilmaan bixin marka arjiga la buuxinayo – riix halkan
CODSIGA LIISKA SUGAYAASHA GURYAHA DADWEYNAHA EE MPHATaariikhda Codsiyada La Soo Gudbinayo: MPHA waxa ay qabaneysaa codsiyada sugayaasha guryaha dadweynaha ee guryaha hos ku xusan. Waa in aad codsigaaga ku soo gudbisaa internetka muddada ay furan tahay qabashada codsiyada. Codsiyada lagu darayo la soo gudbiyo si teel teel (bakhtiyaa nasiib) ah ayaa loo dooranayaa waqtiga lagu daray iyada oo aan loo eegin xilliga la soo gudbiyey.Macluumaadka Loo Baahan Yahay: Si aad codsigaaga u buuxiso waxaa lagaaga baahan yahay magacaaga, taariikhd dhalashada, lambarka bulshada (social security) iyo dakhliga soo GALa xubin kasta oo ka tirsan qoyska. Hal mar kaliya soo gudbi codsigaaga. Qofka laba jeer soo gudbiya codsiga looma ogolaan doono. Waxaa lagu siinayaa lambar muujinaya in aad codsigaaga u soo gudbisay codsigaaga liiska sugayaasha. Fadlan u diyaargaroow in aad qoroto lambarkaas.Sida aad ugu sii jiri karto Liiska sugayaasha: MPHA waxa ay kugula socodsiineysaa iimeyl ama warqad boosatada laguugu soo diro in magacaaga lagu daray Liiska sugayaasha. Haddii uu isbedelo cinwaankaaga, telefoon lambarkaaga, dakhligaaga, ama tirada qoyskaaga, waa in aad si qoraal ah ku soo wargelisaa muddo (toban) cisho gudahood ah marka uu isbedelo. MPHA ma ogolaaneyso in aad cinwankaaga telefoon ku bedesho. Isbedel kasta oo qoraal ah waa inuuu la socdaa lambarkaaga bulshada. Haddii ay MPHA isku daydo in ay kula soo xiriirto oo aadan ka soo jawaabin, ama haddii waraaq boostada laguugu soo diro ay MPHA ku soo noqoto MPHA oo aanay ku soo gaarin, MPHA magacaaga way ka saareysaa Liiska sugayaasha. Marka magacaaga laga saaro ka dib, waxa aad fursad u leedahy muddo hal sano ah ayaad aad heystaaa aad codsigaaga dib ugu soo gudbiso adiga oo soo qoraya macluumaadkaagii cusub. Isbedelka Cinwaankaaga ku soo dir: MPHA Leasing Department, 1001 Washington Avenue North, Minneapolis, MN 55401Shuruudaha: Qoysaska ka soo baxa Shuruudaha oo kaliya ayaa lagu darayaa Liiska sugayaasha. Codsigaaga oo aad soo gudbiso ma aha balanqaad laguu balanqaadayo in lagugu darayo Liiska sugayaasha. Haddii ay MPHA lacag ku leedahay qof ka tirsan qoyska ama qolo kale oo guryaha ah, waa in suurogal in qoyska lagu daro Liiska sugayaasha laakiin waa in ay bixiyaan lacagta lagu leeyahay oo aan wax lacag ah lagu laheyn marka la siinayo guri. Liiska sugayaasha sugayaasha oo lagugu daro ma aha balanqaad in qoyskiinu ka soo baxay shuruudaha laga doonayo ee ay ku heli lahaayeen guryahah dadweynaha.Qoys kasta waa inuu ka soo baxaaShruruudaha hoos ku xusan si loogu daro Liiska sugayaasha:
–Madaxa qoyska waa in ay tahay ama ka weyn tahay 18 sano xilliga codsiga la soo gudbinayo ama haddii uu ka yar yahay 18 sano, xaas yahay, ciidamada gaashaandhigga ka tirsan yahay ama caruurnimada amar maxkamdeed looga saaray.
–Qoys waa inuu qoysku ka kooban yahay ugu yaraan sadex si ay xaq ugu yeeshaan sadex qol ama guri ka balaaran. Waa in qof ka mid ah uu madax u yahay qosyka qofka kale waa inuu qoys ahaan ula nool yahay. Qofka la nool waa da’diisu ka yar tahay 18 sano, naafo ah ama arday buuxa ah oo aan reerka madax u hayn ama ilmo la hayo.
–Waa in aan qofna horey loogu helin fal dambiyeed la xiriira inuu far sameeyo maandooriyaha meetafanimiin ama aanu gobolku waajib kaga dhigin inuu is diiwaan geliyo noloshiisa oo la xiriira fal dambiyeed xagga galmoodka ah.
–Xilliga wareysiga ugu horeeya, qofka mas’uulka ka ah qoyska waa inuu keenaa lambarka bulshada (social security) qofa kasta oo qoyska ka tirsan ama qofkii aan laheyna waa inuu caddeeyaa oo waqraaq saxiixa.
–Qof kasta oo ka tirsan waa inuu ka soo shuruudaha HUD ee la xiriira dhalshada iyo xaaladda socdaalka.
–Qoysku waa inuu leeyahay mid ka mid ah waxyaabaha tixgelinta gaarka ah la siiyo.Kala soocid la’aan: MPHA idinkula sooceyso midab sooc ku dhisan qowmiyadda, midabka, jinsiga, luqadda, diinta, halka qofku ka so jeedo asal ahaan, xaaladda qoyska, jinsiga, doorashada jinsiga, xaladda la xiriirta gargaarka dadweynaha inuu qaato iyo in kale, xaaladda guurka, da’da, cidda uu taageersan yahay siyaasad ahaan ama raacsan yahay. MPHA waxa ay dhaqangelisaa siyaasad ka madax banaan mid ah heyb sooc, xadgud iyo aargoosasho.
Family Waiting List (4 and 5-bedroom)
MPHA Opening Two-Bedroom Family Public Housing Waitlist
Lista De Espera Para Vivienda Familiar De Dos Recámaras – Información sobre la solicitud (en Español)
Labo Qol Qoys Ah Liiska-Sugitaanka – Warbixinto Codsiga (af Somali)